एक घर निर्माण को गणना - के तपाइँ विचार गर्न को लागी, कहाँ शुरू गर्न को लागी आवश्यक छ।
घर निर्माण गणना
कसरी कुनै पनि प्रकार र उद्देश्य को घरहरु को निर्माण शुरू हुन्छ? एक विचार संग! र यो ठ्याक्कै संग विचार को लागत कति छ र तपाइँ एक घर को निर्माण को गणना शुरू गर्न को लागी हुनेछ, त्यो हो, परियोजना को विकास तपाइँको आफ्नै घर को सपना साकार गर्ने बाटो मा पहिलो चरण हुनेछ।
विशेष शिक्षा र ज्ञान बिना, यस्तो काम काम गर्दैन, त्यसैले तपाइँ एक कम्पनी संग सम्पर्क गर्न को लागी छ कि देश घरहरु को डिजाइन को लागी एक सेवा प्रदान गर्दछ। सिद्धान्त मा, एक परियोजना एक घर को निर्माण को एक लगभग पूरा गणना हो, दुबै वित्तीय र टेक्नोलोजिकल पक्ष बाट। लगभग, जब देखि उसले खाता को साइट को लागत र परिसर मा परिष्करण को काम पूरा गर्न को लागी लिन सक्दैन।
को लागत मस्यौदा धेरै फरक हुन सक्छ, सब भन्दा पहिले, यो सबै परियोजना को कुन संस्करण छनौट गरिएको थियो मा निर्भर गर्दछ - व्यक्तिगत, विशिष्ट वा परिवर्तन संग विशिष्ट। एक मानक डिजाइन अनुसार घर निर्माण को गणना सस्तो छ, किनकि त्यहाँ कुनै "पा wheel्ग्रा आविष्कार" को आवश्यकता छैन - सबै कुरा पहिले नै आविष्कार भैसकेको छ। सबै पछिल्ला अतिरिक्त परिवर्तनहरु परियोजना को लागत वृद्धि हुनेछ र या त निर्माण को लागत घटाउनुहोस्, वा यो वृद्धि।
किन परियोजना अझै महँगो हुँदैछ? किनकी यो जसरी भएपनि परिवर्तन भैरहेको छ। यो स्पष्ट छ कि एक अद्वितीय परियोजना को निर्माण को लागी धेरै खर्च हुनेछ, तर यसले ग्राहक लाई ग्यारेन्टी दिन्छ कि अरु कोहि संग यस्तो घर छैन। वित्तीय भाग मा सबै पछिल्ला परिवर्तनहरु यस मामला को टेक्नोलोजी पक्ष संग नजिकको सम्बन्धित हुनेछ, त्यसैले हामी यसलाई मा सार्नुहोस्।
स्वाभाविक रूप मा, क्रम मा शुरू गर्न को लागी, तपाइँ केहि बाहिर केहि बनाउन को लागी आवश्यक छ, र तपाइँलाई कोहि चाहिन्छ जो यो गर्नेछ। त्यो हो, एक घर निर्माण को गणना सामाग्री को लागत र बिल्डरहरु को वेतन शामिल हुनुपर्छ। यो थोक मा सामाग्री किन्न सस्तो छ, तर त्यहाँ एक उपद्रव छ - यो विकल्प ती ग्राहकहरु जो एक टर्नकी आधार मा र कम से कम सम्भव समय मा निर्माण गर्न जाँदैछन् को लागी उपयुक्त छ।
जे होस् यदि त्यहाँ एक उपयुक्त भण्डारण ठाउँ छ, ताकि खुला मा सामग्री छोड्न को लागी, तब तपाइँ पनि अग्रिम मा सबै चीज किन्न सक्नुहुन्छ। सामाग्री को प्रत्येक प्रकार को एक सानो मार्जिन संग किन्नु पर्छ, अभ्यास शो को रूप मा, एक घर को निर्माण को गणना एक राम्रो कुरा हो, तर आंशिक अनुमानित र अक्सर तपाइँ को अतिरिक्त मा केहि किन्नु पर्छ।
तपाइँ पनि खाता मा एक पल यी समान सामाग्री को वितरण को रूप मा लिनु पर्छ, त्यो हो, विक्रेता आफैंले कुन भाग ल्याउनुहुन्छ, कुन भाग तपाइँ आफैं लिन सक्नुहुन्छ, र जसको लागी तपाइँ अतिरिक्त यातायात भाडामा लिनु पर्छ।
जब घर को निर्माण को गणना, एक खाता मा निर्माण संग सम्बन्धित काम को सबै प्रकार को प्रदर्शन लाई ध्यान दिए बिना गर्न सक्दैन। जगहरु को व्यवस्था, पर्खालहरु उठाउने, भुइँ र छत बिछ्याउने, एक छत को निर्माण, काम को समापन, उपयोगिताहरु ले जाने र विन्डोज, ढोका, र अन्य तत्वहरु लाई स्थापित।
यी सबै आवश्यक कार्यहरु, जसको बिना घरहरु को पूर्ण निर्माण गर्न सक्दैनन्। र काम को प्रकार को प्रत्येक को आफ्नै तरीका मा अनुमान गरीएको छ र आफ्नो, समय को एक निश्चित अवधि लिन्छ। एक टर्नकी घर निर्माण को गणना धेरै मामिलाहरुमा अधिक आकर्षक देखिन्छ, त्यो हो, विकल्प जब एक निर्माण कम्पनी प्रदर्शन, परिणाम र सबै काम को गुणवत्ता को लागी जिम्मेवार छ।
सामान्यतया एक राम्रो कम्पनी भित्री र बाहिरी सजावट को लागी परियोजना दस्तावेज को चित्रण बाट, कार्यहरु को सम्पूर्ण दायरा संभाल्न सक्छ। तर त्यहाँ परिस्थितिहरु छन् जब यो सेवा को आदेश वित्तीय वा अन्य कारणहरु को लागी असम्भव छ र निर्माण धेरै चरणहरु मा बाहिर गरिनु पर्छ।
यस्तो स्थिति मा, यो चरणहरु मा एक घर को निर्माण को गणना गर्न को लागी राम्रो छ, अन्यथा त्यहाँ गल्तीहरु को एक जोखिम छ, र धेरै महत्वपूर्ण छन्। आखिर, यदि जटिल निर्माण लेनदेन को समापन को समय मा सबै बारीकहरु लाई ध्यान मा राख्ने को लागी प्रदान गर्दछ र निर्माण को पूरा नभएसम्म व्यावहारिक रूप मा अपरिवर्तित रहन्छ, तब यस्तो संख्या एक चरणबद्ध विकल्प संग काम गर्दैन।
जनवरी मा एक घर को निर्माण को गणना पछि, जुलाई मा तपाइँ सेवा र सामग्री को लागी मूल्यहरु मा परिवर्तन मा धेरै आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ।
तपाइँ आफैं एक विस्तृत निर्माण योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, तर यो क्षेत्र को विशिष्टता संग मेल खान्छ अझै पनी एक प्रश्न हो, त्यसैले यदि त्यहाँ कुनै सीप छैन, तब यो प्रयास नगर्नु राम्रो छ। तपाइँ एक घर को निर्माण को गणना बाहिर बाट एक विशेषज्ञ लाई सुम्पन सक्नुहुन्छ, तर त्यसपछि तपाइँ आफ्नो सेवाहरु को लागी लागत मा एक अतिरिक्त आइटम थप्न को लागी हुनेछ।
सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो जब निर्माण गर्नेहरु गणना मा संलग्न हुनेछन्, तर यो प्रक्रिया को निगरानी र सबै संदिग्ध विवरणहरु लाई स्पष्ट गरिनु पर्छ। र यदि सबै कुरा सही ढंगले गरियो, तब घर को निर्माण समय मा पूरा हुनेछ र योजनाबद्ध रकम खर्च हुनेछ।
8 मा योजना र परियोजना घर 8
परियोजना: घर बाट बार 8CH10। घर योजना 8XXUMUM
परियोजना घर अर्थव्यवस्था वर्ग। सस्तो घरहरू
घर एक हीटिंग ब्लक बाट: मालिकहरु को समीक्षा।
पछिल्लो कार टिन्टि why - किन र कसरी?
अर्को "शून्य" अन्तरिक्ष यात्री - पहिलो उडान को लागी तयारी
57 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,869 प्रश्नहरू।